Wednesday February 17, 2021 - 22:03:33 in Wararka by Mohamed Muse Mohamed
Shir ay isugu yimaaddeen Wasiirada Wasaaradaha qaabilsan ka hortagga iyo xakamaynta cudurka COVID-19 oo uu shir guddoomiyey Ra'iisul Wasaaraha JFS mudane Maxamed Xuseen Rooble: Warbixin dhammaystiranna lagaga dhegeystay bahda caafimaadka oo ay h
Shir ay isugu yimaaddeen Wasiirada Wasaaradaha qaabilsan ka hortagga iyo xakamaynta cudurka COVID-19 oo uu shir guddoomiyey Ra'iisul Wasaaraha JFS mudane Maxamed Xuseen Rooble: Warbixin dhammaystiranna lagaga dhegeystay bahda caafimaadka oo ay hoggaaminaysay Wasiirka Caafimaadka Foosiya Abiikar Nuur iyo khabiirka caafimaadka ee Wasaaradda Caafimaadka Dr Maxamed Maxamuud Fuje oo xaqiijiyey in cudurkii COVID-19 oo si xowli ah ugu fidiyo bulshada.
Sidoo kalena ay tixgeliyeen baaqyada isdaba joogga ah ee ka soo baxaya qaybaha kala duwan ee Bulshada sida culuma’udiinka, ganacsatada, bahda Waxbarashada, aqoonyahanka, indheer garadka, haweenka iyo dhallinyarada, isla markaana ay la tashadeen Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federalka Soomaaliya Maxamed Cabdillahi Farmaajo;
In ay waajib tahay in dadka ka shaqeeya meelaha aan looga maarmi karin ay qaataan Afsaar ama Mask
In la joogteeyo kala fogaanta masaafo aan ka yarayn Hal mitir illaa laba mitir.
In la yareeyo isu socodka gobolada iyo safarada laga maarmi karo.
In masaajidda oo ah goobo cibaado bulshaduna si joogto ah isugu timaaddo lagu dedaalo kala fogaan, af dabool iyo nadaafadda oo kor loo sii qaado.
Adna isu nax, dadkaana u nax.
Ilaahay ha inaga badbaadiyo cudurkan kala qaaday ehelkii adduunka isugu jeclaa.